वर्षा फेरि प्रेममा ! वर्षा फेरि प्रेममा !
वर्षा फेरि प्रेममा !
काठमाडौं । अभिनयका कारण वर्षा सिवाकोटीको त्यति ज्यादा चर्चा हुन्न होला जति प्रेमका कारण हुने गर्छ । यदि बजारमा चलेको हल्ला र सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुले देखाएका गतिविधिलाई आधार मान्ने हो भने उनीहरुको निकटता धेरै नै नजिक देखिन्छ ।प्रेमको विषयलाई उनीहरु दुवैले स्वीकार गरेका भने छैनन् । तर, उनीहरु निकटका कुरा अनुसार वर्षा–राजको प्रेम गहिरो छ ।गत वर्ष एकसाथ होली मनाएपछि उनीहरुको प्रेम सुरु भएको बताइन्छ । वर्षा र राज निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि दैनिक जसो एकसाथ देखिन थालेका छन् ।
निर्देशक मिलन चाम्स, अमेरिकामा बस्ने सविनजंग थापापछि तेस्रोपटक वर्षाको प्रेम चर्चा व्यापक रुपमा भएको हो ।वर्षाले यो विषयमा कुनै सत्यता नरहेको बताउने गरेकी छिन् । तर, उनले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भने प्रेम व्यक्त गरिरहेकी छिन् ।वर्षाले स्टोरी, फेसबुक, इन्स्टामा समेत पटक–पटक राजसँग निकट रहेको संकेत गरिरहेकी छिन् ।अभिनेत्री पुजा शर्मासँग पछिल्लो समय सम्बन्ध राम्रो बनाएकी वर्षालाई पुजाकै कारण राजसँग प्रेम सुरु भएको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ ।
वर्षाका प्रेमी भनिएका राज अभिनेताका साथै हाल चलचित्र विकास बोर्डमा सदस्य नियुक्त भएका छन् ।त्यसो त फिल्म उद्योगमा खुलेरै प्रेम गरेका कलाकारहरुले खुलेर अफेयरमा रहेको स्वीकार्दैनन् ।आफूहरू असल साथी मात्र भएको स्वाङ पार्छन् उनीहरुले । अब वर्षा र राजको नाटक चैँ के हो त्यो त समयले नै बताउने छ ।